Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /customers/0/9/6/barqamaal.com/httpd.www/wp-includes/compat.php on line 502 Magaalada Godod ee dhulka Puntland oo ciidamada Galmudug Saakay aroortii weerar ku qaadeen. 2017-09-23 – Barqamaal
Magaalada Godod ee dhulka Puntland oo ciidamada Galmudug Saakay aroortii weerar ku qaadeen. 2017-09-23
Magaalada Godod ee dhulka Puntland oo ciidamada Galmudug Saakay aroortii weerar ku qaadeen.
Wara lagu kalsoonyahay ayaa soo tabinaya in ciidamada Galmudug oo ka kala yimid magaalooyin kala gadisan sida koonfurta Galkacyo ay saaka aroortii weerar ku qaadeen magaalada Godod. Ciidamada Galmudug ayaa tdobaadyadii ugu dambeysey waxay dilal aan kala go, lahayn ka gaysteen magaalooyinka Galkacyo, Godod, Gacnafale, Balibusle.
Wadahadaladii waayahaan u socday waxgaradka labada dhinac iyo maamul goboleedyadaba waxba kama suuroobin, waxaana loo aneynayaa in aan bulshada ku nool deegaanka Galmudug aysan marna joojinayn dilalka qorshaysan iyo weerarada joogtadaa. Dadka ku nool waqooyi bari ee Gobolka mudug, gaar ahaan jiida loo yaqaan wadaagsin ayaa waxay isku dayeen in ay nabad kuwada noolaadaan dadka Galmudug dagan. Waxay dadka jiida wadaagsindaga ee reer puntland ku andacoonayaan in aan maleyshiyada ka soo jeeda Galmudug iyo dadka galmudug dagan badankooduba aysan kugu nabadgalinayn islaanimo, Muslinimo, darisnimo, qaraabo iyo xigaal, Somaalinimo iyo Afrikaanimo midna.
Waxaa dagan ugu yaraan boqol kun oo reer Galmudug ah dhulka Puntland markii ay kasoo carareen abaartii Sima, waxaana dowlada Puntland iyo dadkeeduba u soo dhaweeyeen dadkaas si islaanimo ah, soomaalinimo ah balse xataa iyada kuguma qadiranayaan, kugumana nabadgalinayaan, mana dareensana dadkooda ku daadsan caloosha dhulka reer Puntland masuuliyada ka saaran ayey bulshada reer Puntland dhexdooda isugu sheegayaan.
Waxaa kaloo dadka ku nool gobolka mudug ee reer Puntland ay mudo aad u dheer la fajacsanaayeen umad markii aad balan, axdi iyo kitaa bka rabi hortiisa isku dhaarsataan saacadaha ku xiga lagasugayo iney dad islaam ah laayaan. Waa dhaqan bulshada ku nool deegaamada Galmudug u gaar ah waa mid islaanimada kasoo horjeeda, waana mid xeerarka soomaalidu leedahay lidi ku ah.
Waxaa dadka reer mudug ee kasoo jeeda Puntland aysan wali fahmin, walina garan la,yihiin sababta dadkaan dagan Galmudug ay caado uga dhigteen in dad islaam ah oon waxba u dhimin iska laayaan. Waxa ku khasbaya in horumar la,aan, diin la,aan, dadkooduna colaad joogtaa wadaan, dilal iyo barakac ay dadka islaamka ku sameeyaan isugu diraya baahiyaha wararka fidiya. Suaasha dadka reer Puntland isweydiinayaan baa waxay tahay: Ilaa goorma ayey Galmudug dadka ku nool wadayaan dadka Islaamkaa ee soomaalidaa layntooda? Goorma ayaa culimadoodu iyo caamadoodu garan doonaan in dadka Islaamka ah dani ugu jirin islayn, bara kicin, curyaamin horumarka umada islaamka iyo ubadka soo korayaba?